Rar bilaash ah oo ka soo horjeedda qiimo dhimista | Martech Zone
Si aad ah uma hubo inaad u sinnaan karto labadan istiraatiijiyad ee sasabashada macaamiisha. Waxay ila tahay aniga in dhimis-dhimistu ay tahay macne weyn oo qof lagu geeyo bartaada e-commerce, laakiin maraakiibta bilaashka ah waxay noqon kartaa habka lagu kordhiyo sicirka beddelaadda. Waxaan sidoo kale xiise u qabaa sida ay daacad u yihiin dadka wax iibsanaya. Haddii aad qiimo dhimis, dadyohow maalin maalmaha ka mid ah soo noqdaan oo wax iibsadaan qiimo dhimis la'aan? Haddii aad bixiso maraakiib bilaash ah, miyaanay taasi ahayn muuqaal ka mid ah bartaada oo qof kastaa u iman doono inuu ka filo oo u isticmaalo marar badan?
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee tafaariiqleyda internetka ay la soo kulmeen tan iyo maalintii koowaad waxay iska caabin ku yihiin khidmadaha rarka. Si looga dhigto wax ka iibsiga websaydhka in ka badan sidii qof wax loo iibsanayo, baayacmushtariyaasha qaar waxay bilaabeen inay ku soo diraan maraakiibta bilaashka ah amarrada internetka. Maraakiibta bilaashka ahi runtii ma waxay ku dhiirrigeliyaan booqdayaasha degellada inay wax badan iibsadaan? Laga soo bilaabo Monetate Infographic
Tags: dhimismaraakiibta freedukaanka internetkamaraakiibta